Obama oo xirayo xabsiga Guantanamo Bay – STAR FM SOMALIA
Obama oo xirayo xabsiga Guantanamo Bay
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa u gudbiyeey Golaha Kongareeska qorshe lagu xirayo xabsiga Guantanamo Bay oo ah meel uu Mareykanka u ku hayo maxaabiista loo heysto argagixisnimada.
Qorshahan oo ah mid ka mid ah balanqaadki madaxweyne Obama hase yeeshee aanu wali fulin, ayuu ku doonayaa inuu kaga soo saaro xabsigaasi ilaa iyo 91 maxbuus, kuwaas oo loo dirayo dalalka ay kasoo jeedaan ama loo wareejiyo xabsiyada iyo xarumaha milatariga gudaha Mareykanka.
Hase yeeshee Kongareeska Mareykanka ayaa si weyn u diidan in dad ku eedeysan falal aragagixiso loo soo wareejiyo carriga Mareykanka, waxaana si cad ay u sheegeen in qorshahaasi ay hor istaagi doonaan.
Qarashka ku baxa xabsigan ayaa sanadkiiba gaaraya ilaa $445m . Xeritaankiisa waxa uu qeyb ka ahaa balanqaadki Obama ee sanadki 2009.
Xabsigan oo ku yaala dalka Cuba ayaa waxaa sharciyadiisa iyo xaaladahiisa nololeed aad uga qeyliyey kooxaha xuquuqda aadanaha. Waxaa lagu xiray 780 maxbuus tan iyo sanadki 2002.
Osama Bin Laden oo $29m dhaxalkiisa ka mid ah ku dardaarmay in lagu bixiyo Jihaadka
Ban Ki Moon Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey oo gaaray Burundi (Sawirro)